တစ်​ကယ်​ဆို ဖြဲတတ်​ဖို့ပဲလိုတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » တစ်​ကယ်​ဆို ဖြဲတတ်​ဖို့ပဲလိုတယ်
Posted by naywoon ni on May 16, 2014 in Drama, Essays.., My Dear Diary | 37 comments
နေ၀န်းနီ - အ​တွေး အ​ရေး
မန်းဂဇက်​တက်​ကို ​နေ၀န်းနီ စ​ရောက်​တာ ၂၀၀၉ စက်​တင်​ဘာ ဆို​တော့ ​လေးနှစ်​​ကျော်​ ငါးနှစ်​နီးပါး ။ ဒီ ပို့စ်​နဲပါဆို ၃၂၂ လား ​ရေးတင်​ခဲ့ဖူးပါတယ်​ ။ ဒီလို ​ရေးတင်​ရာမှာ ကဗျာသမား စာ​ပေသမား ထုံးစံအတိုင်း ​” စိတ်​ပါမှ ​ရေးမယ်​ ” ဆိုတဲ့ ထုံးနဲ့​ရေးခဲ့တာပါ ။ home page မှာတက်​လာတဲ့ ပို့စ်​တိုင်းကို စိတ်​လိုလက်​ရ အင်​မတန်​ စိတ်​၀င်​စားကာမှ ကိုယ်​က ​ကော်​မန့်​ ​ပေးခဲ့သလို ပို့စ်​တစ်​ခု တင်​ပီးတိုင်း ဂျီ​တော့က​နေ ​ဖေ့စ်​ဘွတ်​က ​နေ ​ကော်​မန့်​ ​တောင်းခဲ့တာမျိုးလဲ မရှိပါဘူး ။ သူတို့လဲ စိတ်​၀င်​စားမှ နှစ်​ခြိုက်​မှ ​ကော်​မန့်​​ပေးပါ​စေ​ပေါ့​လေ ။ ဒါ​ပေမဲ့ ဗျ ။ လူဆိုတာက ခက်​တယ်​ ။ လွန်​ခဲ့တဲ့ တစ်​နှစ်​အ​ကျော်​​လောက်​ကပီး ​နေ၀န်းနီ စိတ်​တစ်​မျိုး​ပြောင်းလာတယ်​ ။ ကျိုးကျား ကျိုးကျား ​ပေါ်လာတဲ့ စိတ်​ပါ။ ဘာလဲဆို​တော့ home page မှာ ထိပ်​က​နေ ချိတ်​ဆွဲ ခံရတဲ့ ” စတစ်​ကီ” ဆိုလားဗျာ ……. အဲ့ဒိမှာ ကိုယ်​​ရေး တဲ့ ပို့ စ်​ ပါ​စေ့ချင်​တာဗျ ။ ဘယ်​သူ့မှ​တော့ မ​ပြောဖြစ်​ပါဘူး ။ ” ရှက်​လို့ ” ။ ထူးဆန်းတာက အဲ့ ” ရှက်​စိတ်​” ၀င်​လာပြန်​ရင်​လည်း ​စော​စောက စိတ်​က​ပျောက်​သွားပြန်​​ရောဗျ ။ မထူးဆန်​ဘူးလား ။ တစ်​​နေ့က facebook ထဲမှာ ​လျှောက်​လည်​ရင်းနဲ့ ကိုမှူးသစ်​ဆီ ​ရောက်​သွား​ရော ။ သူက ဘာပို့စ်​တင်​ထားလဲဆို​တော့ သူ သမတ ရူး ​နေတဲ့ အ​ကြောင်းတင်​ထားသဗျ ။ အဲ့​တော့မှ ​နေ၀န်းနီလဲ ​ရောဂါ ​ဟောင်း ပြန်​​ပေါ်လာပြန်​​ရော​ပေါ့ ။ သူ့ စတိုင်​ယာ ပို့စ်​​လေးလို ​ရေးချင်​စိတ်​​ပေါ်လာပြန်​​ရော ။ အ​ကြောင်း အရာက မရှိ​သေးဘူး ။ ဒါလဲ ​မေ့​မေ့ ​ပျောက်​​ပျောက်​ပါပဲ ။ သတိရ​အောင်​လာဆွ​ပေးတာက မန်း ဂဇွတ်​တက်​ထဲ ၀င်​လာချိန်​မှာ တန်း​တွေ့တာပဲ ။ ဘာတဲ့ ရှက်​တတ်​ရင်​ ဘာဖြစ်​တယ်​ဆိုလား ။ ကိုခိုင့်​ကို ​တောင်​ နာမယ်​တတ်​ဖြဲထားတာ ။ အံမယ်​ အဖြဲခံထားရတာ​တောင်​ ဒီလူကြီးက ​နေ၀န်းနီ အရူး ပိုးထခဲ့ တဲ့ ” စတစ်​ကီ” ​တွေ ဘာ​တွေ​ပေးလို့ဗျ ။ ဘာ​ကြောင့်​လဲ ​ပေါ့ ။ ဘာ​တွေများ ​ကောင်း​နေလို့လဲ​ပေါ့ ။ အဲ့ ဖတ်​ရတာ ​တော့ မဆိုးဘူး​ပေါ့ ။ အဲ့မှာ ဘာသွား​တွေ့လဲဆို​တော့ ….. https://www.facebook.com/kogyimind.mind/posts/418349204976592
က တင်​ထားတဲ့ပို့စ်​ကို စကားလုံး​ပြောင်းပြန်​သုံးပီး ဆန့်​ကျင်​ဘက်​ပြန်​​ရေးထားတာပဲ ။ ကာဂရိုဇီ အရဆို ​ကော်​ပီလို့​တောင်​​ပြောလို့ရတာပဲ။ ဟို မဂ္ဂဇင်း ” ရယ်​စရာ” လား အဲ့မှာ ရည်းစားစာကို အ​ဖြေ​ပေးတဲ့စာ ပြန်​​ရေးရသလိုမျိုး …….။ ​ပေးထားတဲ့ အ​ကြောင်းအရာ အချက်​အလက်​တိုင်းကို သ​ဘောတူသလား ငြင်းမှာလား ပြန်​ရေးရသလိုမျိုး …… ကိုယ်​ပိုင်​အ​တွေးအ​ခေါ် အယူအဆမပါဘဲ မူရင်း အာ​ဘော်​ကို မ​ပျောက်​​အောင်​ လက်​ခံတယ်​ လက်​မခံဘူး ​ရေးထားတာမျိုးပဲ ဆို​တော့ …….။
အဖြဲခံ ကိုခိုင်​က ” သူ့ဆိုဒ်​ ထဲ ပွဲစည်​​အောင်​ ” စတစ်​ကီ ” ​တွေဘာ​တွေ​ပေးလို့ ။ ​နေ၀န်းနီ သ​ဘော​ပေါက်​လိုက်​ပါပီ ။ စတစ်​ကီ လိုချင်​တာများ” တစ်​ကယ်​ဆို ဖြဲ တတ်​ဖို့ပဲ လိုတယ်​ ” လို့ ။ ဒီ​တော့ ” စတစ်​ကီ ” ရဖို့အတွက်​ ရွာထဲက စပျစ်​သီး တစ်​​ယောက်​​ယောက်​ကို ဖြဲ ရပါလိမ့်​မယ်​ ။ ဆို​တော့ကာ ကိုခိုင်​က​တော့ ဟိုကဖြဲထားတာ ​တော်​​တော်​ ” ပြဲ ” ​နေ​လောက်​ပီ ။ မဖြဲချင်​​တော့ဘူး ။ ဘယ်​သူ့မှ မဖြဲ ရ​သေးတဲ့ အသစ်​​လေး လိုက်​ရှာ ဖြဲ ပါမယ်​ ။ ဒီ​တော့ကာ ကိုယ့်​ဖာသာ လုံ​အောင်​ထိုင်​​နေကြပါ။ ကျုပ်​က​တော့ Home page မှာ စတစ်​ကီ ရဖို့ ဖြဲမှာပဲ ။ တစ်​​ယောက်​​ယောက်​ကို ……..။ အဲ့ခါကမှ ” ဘနီ” က ” ဖြဲတယ်​ ​တော့ ” မလုပ်​နဲ့ …..။ ခုထဲက ကြို​ပြောထားတာ ။ ​နေ၀န်းနီ စတစ်​ကီ ဖြစ်​ဖို့ တစ်​​ယောက်​​ယောက်​က​တော့ စ​တေးရမှာပဲ ။ ” တစ်​ကယ်​ဆို ဖြဲတတ်​ ဖို့ပဲ လိုတာ ” မဟုတ်​လား ဟင်​ ။
ကျနော်လည် ဖြဲတော့မယ်ဂျာ သကြိုင်ခီး ကို
စတစ်ကီက.. ပေးချင်စိတ်ရှိရင်ပေးတာပါ..။ လူများများဖတ်စေချင်တာမျိုး.. အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်.. တိုင်ပင် ဆွေးနွေးစေလိုတာမျိုး.. စသဖြင့်ပေါ့..။
Editor’s Choice တိုင်းစတစ်ကီမဟုတ်သလို.. စတီကီတိုင်း.. Editor’s Choice လည်းမဟုတ်ဖူးဗျ..။
ဒီအတိုင်းပဲ.. ပို့စ်ကောင်းတွေကလည်း.. စတစ်ကီဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာ..
သတင်းစာထဲထည့်မယ့်စာဆို.. စတစ်ကီပေးဖို့.. ၀န်လေးတယ်..။ လူများများဖတ်မိသွားမှာစိုးလို့ပါ..
ကြာပါတယ်..၀ိုင်းဖြဲ ကြဗျာ ..
ဗျိ ဗျိ ….
စတစ်ကီရဖို့ကို ကျနော်က ဆွဲစိတဲ့နည်းသုံးတာ
ဂဇက်အတိုင်ပင်ခံပိုစ့်တို့ ကဗျာပြခန်းတို့ဆို ဆွဲစိထားတာလေ
ဆွဲစိလိုက်တော့ ဖြဲတာလိုမျိုး ပြဲမသွားဘူးပေါ့
ကျွန်မလဲဖြဲမလို့ စိတ်ကူးထဲတော့စာစီပီး သွားပြီ။ ဒီပြသနာတွေဖြစ်တာ အစိုးရမကောင်းလို့။ အစိုးရကိုဖြဲမယ်။ ဒါဘဲ
အာ့ ဆို နာလည်း နာ့ ယောက်ခမွ နောက်က လိုက်မယ်။
သြော် စတစ်ကီ စတစ်ကီ……
ဒါဆိုရင် ဖြဲမယ်ဗျာ.. ကျနော်လည်း
ဘယ်ကနေ စ ဖြဲရပ…
ဒီအတိုင်းရမ်းဖြဲလို့ရမလား အဘနီရဲ့ ကြီးဘယ်နှစ်ကြီးကို ပိုင်သဒုံး ပြော…
ရုံးထဲမှာ အသံမထွက်အောင် မနဲ ကျိတ်ရီမိပါကြောင်…. ခုခွိ…. ခုခွိ….
ဆရာ နေ ဖြဲသည်
ကို နေ လာ ဖြဲ ဗျာ
မန်း လေး က နေ
စောင့် နေ မယ်။
အော် ..မေ့တော့မလို့ …..ကျော်စွာခေါင်ပေးပါ။
ကိုယ်တို့တော့ စပျစ်သီး မဟုတ်တော့ အေးဆေးဘဲ … အန်တီဒုံ တို့သာ မင်းသားတ နေရတာ ..
နာ လည်းအ နေ အထိုင် ဆင်ခြင် မှဖြစ်ရော့မယ်
ကျွန်​​တော်​က ကဗျာသမား စာသမား တစ်​​ယောက်​ပါ ။ အဲ့ဒိ​တော့ မူမမှန်​ဘူးထင်​ရင်​ ငြိမ်​မ​နေတတ်​ပါ။ ကိုယ်​ချင်းစာ တရားလဲ သူတစ်​ကာထက်​ပိုပါတယ်​ ။ တစ်​ကယ်​လို့ဗျာ ဒီထဲက သူတစ်​​ယောက်​​ယောက်​ရဲ့စာကို သူ့စကားလုံး​တွေပဲ သုံးပီး အဓိပ္ပာယ်​ ​ပြောင်းပြန်​ သက်​​ရောက်​​အောင်​ စာတစ်​ပုဒ်​ အဖြစ်​ ပြုလုပ်​ခြင်းခံရပီးအုတ်​​အော်​ ​သောင်း နင်းဖြစ်​​နေတယ်​ ဆိုရင်​ အဲ့သူ ဘယ်​လိုခံစားရမလဲ ။ ကျွန်​​တော်​သာဆိုရင်​ ​တော်​​တော်​​ပေါက်​ကွဲ မိမှာ ။ ကဗျာသမားရဲ့ အသက်​ဟာ စကားလုံးပါ ။ စကားတစ်​လုံးရဖို့ မိုးလင်းရတဲ့ ရက်​​တွေလဲ ရှိတတ်​ပါတယ်​ ။ အဲ့ဒါ ​ကြောင့်​ စကားလုံး တစ်​လုံးတ်ိုင်း တစ်​လုံးတိုင်းအတွက်​ အသက်​နဲ့ ထပ်​တူ တန်​ဖိုးထားတတ်​ကြပါတယ်​ ။ သူကြီးက ပိုသိမှာပါ ။ ဒါကို သူက Home page မှာ ချိတ်​ဆွဲ​ပေးပီး​ထား​တော့ ကျွန်​​တော်​ ငြိမ်​မ​နေနိုင်​​တော့ပါဘူး ။ ကဗျာသမားချင်း ထားတဲ့ ကိုယ်​ချင်းစာတရား​ကြောင့်​ပါ ။ ဒီလို လုပ်​လိုက်​တာ တစ်​ဖက်​လူမှာ ဘယ်​လိုခံစားရမလဲ ​တွေးကြည့်​ကြပါဦး ။ ကျွန်​​တော်​သာ ကိုခိုင့်​ ​နေရာမှာဆိုရင်​ တစ်​စုံတစ်​​ယောက်​ရဲ့စာကို စာပိုဒ်​ လိုက်​ပဲဖြစ်​ဖြစ်​ တစ်​စိတ်​တစ်​​ဒေသပဲ ဖြစ်​ဖြစ်​ ယူထားပီဆိုတာသိရက်​နဲ့ ကိုယ့်​ဝက်​ဆိုက်​ စာမျက်​နှာ​ပေါ်မှာ အတင်​ခံမှာ မဟုတ်​​ပေဘူး ။ ဒီလို​ပြောလို့ မူရင်းကဗျာ​ရေးသူနဲ့ သိလားဆို​တော့ လားလားမှမသိပါဘူး ။ ကဗျာချစ်​စိတ်​ တစ်​ခုထဲနဲ့ ဒီစာကို ​ကောက်​​ရေးတာပါ ။
ခု မှ ဘဲ ရွာ ထဲ စိတ် အေး လက် အေး ဝင် ရဲ တော့ တယ်
မူရင်း ကဗျာလေး ဖတ်ချင် စိတ်ဖြစ်မိပါ တယ် ကိုနေ ရေ။
အဓိက က အဲဒါ ဗျ။
ကိုနေ ပို့စ်ထဲမှာ လင့်ပါတယ်လေ နားစွန်နားဖျား ဆြာဂျီးရဲ့
တားတားက ဖုန်းအစုတ်လေးနဲ့ သုံးနေရတော့…
အဲဒီလို လင့်တွေ ဖွင့်လို့ မရဘူး…ကိုကိုရဲ့…
ရော့…ဟော့ဒီမှာကဗျာဆိုပြီး ပြမှ မြင်ရမယ့် ဘ၀ပါ ခဗျာ…ခဗျ…။
အခု ဗစ်တိုးရီးယား က နက်ဆိုင် ရောက်နေရပါပြီ…ကိုကို…။
March 28 · Edited ·
ပြည်တွင်းမှာ နေနေတဲ့ သူတော်တော်များများက
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလိုလူမျိုးဟာ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာမှာပဲ ရှိနေတယ်ထင်ကြတယ်။
ဘာကြောင့်ဆိုတော့ သူတို့ဟာ ဒေါက်တာ ဆွန်ယက်ဆင်၊ ဟိုးဆေးရီးဇော်၊ ဟိုချီမင်း၊ ဂန္ဒီ၊ ချေဂွေဗားရား တို့အကြောင်းမသိကြတော့ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိတဲ့ သူရဲကောင်းတွေကို လေးစားရကောင်းမှန်းမသိကြဘူး။
လေယဉ်ပေါ်ကနေ မြန်မာပြည်ကို မမြင်ဘူးတော့
အခုချိန်ထိ Golden Land ဆိုပြီးဘ၀င်မမြင်ပါနဲ့။ တောတွေပြုန်းပြီး မီးလောင်ပြင်လိုဖြစ်နေတဲ့ လွင်ပြင်၊ တောင်တန်းတွေကိုမှ သူတို့မမြင်ဘူးကြပဲ။
တမလွန်အတွက် ပြင်ဆင်တဲ့အလေ့အကျင့်တွေ ထုံနေတဲ့ ထမင်းရေ၊ ချောင်းစီးအလှူကြီးမျိုးတွေကိုပဲ မြင်ဖူးပြေီး ဘ၀င်မြင့်မနေပါနဲ့။ ကမ္ဘာ့သူဋ္ဌေးသူကြွယ်ကြီးတွေရဲ့ ကိုယ်ကျိူးမဖက် ပရဟိတသက်သက်လှူဒါန်းမှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုရကောင်းမှန်းမသိကြဘူး။
Globalization ကိုနားမလည်တော့ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာပဲ ကိုယ်နေရင် လုံခြုံပြီလိုထင်ပြီး ဘ၀င်မြင့်မနေကြပါနဲ့။ CNN Effect, Al Jazeera Effect ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာအရှေ့ခြမ်းမှာ ဖြစ်နေတာကို အနောက်ခြမ်းကချက်ချင်းသိနိုင်တာကို လက်မခံနိုင်ကြသေးဘူး။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေမကျအောင် သာသနာစောင့်နတ်မင်းကြီးတွေက မြန်မာနိုင်ငံကို ကာကွယ်ပေးထားတယ်လို့ သိပ်ဘ၀င်မမြင့်ကြပါနဲ့။ အာရှမှာ ရာသီဥတုဒါဏ်အဆိုးရွားဆုံးခံရတဲ့ နိုင်ငံဆယ်နိုင်ငံမှာ ဒုတိယမြောက် အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်နေတာကိုမှ မသိပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာငါးပါးသီလထွန်းကားပါတယ် ဆိုပြီး သိပ်ပြီးဘ၀င်မမြင့်ပါနဲ့၊ တကယ်တော့ စာအုပ်ထဲမှာပဲ ထွန်းကားပြီး မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားက မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိုင်ငံတွေလို့ ခေါ်တဲ့ ဥရောပနိုင်ငံသားတွေစံထားတဲ့ Gentleman ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုတောင် မမှီသေးတာကိုမှ မသိကြပဲ။
ထမင်းငတ်ပြီးသေတဲ့မသာ မြန်မာပြည်မှာ မရှိဘူးလို့ ဘ၀င်မြင့်မနေကြပါနဲ့။ တောင်သမန်အင်းထဲက ဓါတ်မြေသြဇာအဆိပ်သင့်နေတဲ့ငါးကြော်တွေကိုမစားဖို့ သက်ဆိုင်ရာသံရုံးတွေက သူတို့နိုင်ငံသားတိုးရစ်တွေကို တိုးတိုးတိတ်တိတ်မှာထားတာကိုမှမသိကြပဲ။ ထမင်းငတ်ပြီးမသေပေမယ့် တရုပ်နဲ့ယိုးဒယားက၀င်လာတဲ့ သူတို့နိုင်ငံသားတွေတောင် မစားတဲ့ သွားရေစာတွေကြောင့်သေနေတဲ့ကလေးတွေ၊ ဓါတုအဆိပ်သင့်နေတဲ့ ဟင်းသီး၊ ဟင်းရွက်သားငါးတွေကြောင့် သေနေကြတာတွေ၊ အဟာရငတ်ပြီး သေနေကြတာတွေကိုမှ မသိရှာကြပဲ။
အိမ်ထဲအထိဝင်၊ ခြင်ထောင်ထဲလှန်ကြည့်တဲ့ အထိ ဧည့်စာရင်းစစ်တာကို ကြည့်ပြိး မြန်မာပြည်မှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ရှိတယ်ထင်နေကြတယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ ကိုယ့်အိမ်တံခါးကို ၀ါးရမ်းမပါပဲ လာခေါက်ရင်တောင် ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှုနဲ့ တရားစွဲလို့ရတယ်ဆိုတာကိုမှ မသိပဲ။
ပြည်တွင်းမှာ ကျပ်တည်းကျဉ်းမြောင်းစွာ အမြဲနေရတာတော့အကျင့်ပါနေပြီး လူတိုင်းလည်းငါတို့လို ဒီလိုပဲ ရုန်းကန်နေရတာပဲ၊ ဘယ်သူမှ ထမင်းအလကားလာမကျွေးဘူးဆိုပြီး တဘက်သက် မာနတွေကလည်းကြီးတယ်။
တစ်ခြားနိုင်ငံတချို့မှာ ကလေးတွေရဲ့ ကျောင်းစားရိတ်၊ လူတိုင်းရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကို အစိုးရဆီက အလကားရနေတယ်ဆိုတာမှ သူတို့မသိပဲ။
အခုချိန်ထိတောင်တွေဖြိုလို့ကောင်းတုန်း၊ သစ်တွေခုတ်လို့ကောင်းတုန်းပဲ။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ကိုယ်လု့ပ်တာ ဘာဖြစ်လည်းဆိုပြီး ရန်တောင် လို နေသေးတယ်။
Butterfly Effect လို့ခေါ်တဲ့ လိပ်ပြာလေးတစ်ကောင် တောင်ပံခတ်ရုံနဲ့ အမေဇုံသစ်တောက သစ်ပင်ကြီးတွေ တ၀ုန်းဝုန်းလဲပြိုနေတာကိုမှ မသိပဲ။
စမတ်ဖုန်းတွေ၊ မော်တော်ကားတွေ၊ ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ ဈေးကွက်ထဲမှာ မြင်တွေ့နေရတော့ မြန်မာနိုင်ငံကြီးခေတ်မှီဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်နေပြီလို့ ဘ၀င်မမြင့်ပါနဲ့။ တကယ်တော့ မြန်မာပြည်ကိုပို့တဲ့ ပစ္စည်းကို သူ့တို့နိုင်ငံသားတွေ လုံးဝမသုံးကြတာကိုမှ မသိပဲ။
မြန်မာပြည်က ရှုခင်းတွေသာအလှဆုံးလို့ထင်နေကြတယ်။ ဒါတွေကိုကြည့်ချင်လို့ နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေလာနေတယ်လို့ ထင်ပြီး ဘ၀င်မမြင့်ပါနဲ့ဗျာ။
တကယ်တော့ မြန်မာပြည်ထက်အဆပေါင်းများစွာသာတဲ့ ရှုခင်းတွေနိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာမှ မသိပဲ။ သူတို့လာတာဟာကမ္ဘာ မြင်တွေ့ရခဲတဲ့ တတိယနိုင်ငံက ဆင်းရဲသားတွေရဲ့ ဘ၀ကို တအံ့တသြကြည့်ဖို့လာတာများတယ် ဆိုတာကို သိမှ မသိပဲ။
သိပ်လည်းဘ၀င်မမြင့်ကြနဲ့ဗျာ..ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဆိုတာ သေးသေးလေးပါ။ အခုခေတ်က နိုင်ငံကို လာပြီးသိမ်းတဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူး။ သွားသိမ်းစရာမလိုပဲ ကိုယ့်နိုင်ငံက ယူချင်သမျှ ယူလို့ရနေပြီ။
အခု ကိုယ့်လူတို့သုံးနေတဲ့ ဆိုင်ကယ်၊ မော်တော်ကား၊ ကွန်ပျူတာအပါအ၀င် အပ်တိုတစ်ချောင်းတောင် ပြည်တွင်းမှာ မလုပ်နိုင်သေးဘူး။ ဒါတွေပြည်တွင်းမှာ များလာတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဟာ မြန်မာပြည်က ကျွန်းသစ်၊ ရေနံ၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ နဲ့ တခြားသယံဇာတတွေ လျော့သွားပြီးဆိုတဲ့ သဘောပဲ။
ိသိပ်လည်း ဘ၀င်မမြင့်ကြပါနဲ့။ သယံဇာတတွေကုန်ခန်းစပြုနေတဲ့တိုင်းပြည်၊ ခြစားမှုတွေနဲ့ ယိုယွင်းနေတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုရောဂါစွဲကပ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်။ ဒီလိုတိုင်းပြည်ကို ဘယ်နိုင်ငံမှ နာမည်အပျက်ခံပြီး ကိုလိုနီ လုပ်နေစရာမလိုပါဘူး။ တရုပ်တွေနေချင်လည်းရနေတာပဲ။ ကုလားတွေနေချင်လည်းရနေတာပဲ။ တံခါးမရှိ၊ ဓါးမရှိ ၀င်ချင်တိုင်းဝင်၊ ထွက်ချင်တိုင်းထွက်လို့ရနေတဲ့ တိုင်းပြည်ကို ဘာလို့အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး သိမ်းနေမှာလည်း။
ဒါကြောင့် သိပ်လည်း ဘ၀င်မြင့်မနေနဲ့။ အချိန်သိပ်မရှိတော့ဘူး။
မြန်မာပြည် လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်ဖို့ အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်မယ့် ခေါင်းဆောင်ကို ၀န်းရံကြ၊ သူ့ကို ခိုင်းကြ။ တာဝန်ပေးကြ။ နောက်ဆုံးမြှော်လင့်ချက်က သူပဲရှိတော့တယ်။
ဒီမယ်မိတ်ဆွေ၊ ကိုယ့်လူ ကြည်တာမကြည်တာ၊ သဘောကျတာ၊ မကျတာ ခဏထား၊ ကိုယ့်လူတို့၊ ကျုပ်တို့မှာ ရွေးစရာမကျန်တော့ဘူး၊ ကိုယ်မှာ မြှားတွေ စူးဝင်နေရင် အသက်ဘေးနဲ့ အနီးဆုံးမြှားတံကို အရင်ရှင်းပစ်ရမှာပဲ။ ဒါကြောင့် မျိုးစောင့်သမားအားလုံး၊ မျိုးချစ်သမားအားလုံး၊ အားလုံး..အားလုံး.. ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့ပဲ အာရုံစိုက်ကြ။ ပြီးမှ လွတ်လပ်စွာ ၀ိဝါဒကွဲကြ၊ ငြင်းကြ၊ ခုန်ကြ။
တယ် လဲ ခေတ်နောက်ကျနေပါလား။
ဖြဲတဲ့ ခေတ် မဟုတ်ဘူး။
ဖြတ်ဖောက်ချုပ် ခေတ် ဗျ။
မဖြဲဘဲနဲ့ စတစ်ကီ ရအောင် လုပ်တဲ့နည်း ရှိတယ် …
အလဂါးတော့ မရဘူး …
တစ်ဝိုင်းလောက် ကစ်လိုက်ရမှ ….
ဘယ်လိုဒုန်း ဥနေ …
သဂျီးက တူ့ယွာ လူစီ​အောင်​လုပ်​တာ ယီမန်​ခြက်​​ပေ့သွားပီနဲ့ တူယဲ့ ။ ပိုင်​ရှင်​၀င်​လာတာ ​တွေ့လိုက်​လားလို့ အဟိ ပွဲကျည့်​ယ​အောင်​ ​နေယာအူးအုံးမှ
ကျမ ကဗျာသမား မဟုတ်လို့ သိပ်ကိုယ်ချင်းစာမပေးတတ်တာလားမသိဘူး။
တချို့ အဲလိုပဲ ပြောင်းပြန်ရေးကြတာရှိတယ်လေ။
မင်းဘာမှ ထပ်မလုပ်နဲ့။ ဆိုတာကို
မင်းဘာမှ ထပ်မလုပ်နဲ့ လို့ ရေးကြတာမျိုးလေ။
ဟိုရှေးတုံးကလည်း ဦးကလိန် လို သီချင်းမျိုးတွေ သံတူကြောင်းကွဲ ရေးတတ်ကြတယ်မလား။
ကဗျာသမားဟာ ကိုယ့်​စကားလုံးတစ်​လုံးကို ကိုယ့်​အသက်​နဲ့ထပ်​တူတန်​ဘိုး ထားပါတယ်​ ။ သူများသုံးပီးသား စကားလုံးတစ်​လုံးကိုလဲ အလွယ်​တစ်​ကူ ယူငင်​ သုံးစွဲ​လေ့ မရှိဘူး ။ ယူ သုံးမိရင်​​တောင်​ မူရင်း ကဗျာဆရာရဲ့ နာမယ်​နဲ့တွဲသုံး​လေ့ရှိတယ်​ ။ ဥပမာ ဒဂုန်​တာရာရဲ့ ​လေနု​အေးက ​နော့ဆဲကို ဆိုတဲ့စကား ။ ကဗျာမှာသုံးခဲ့တာ​တောင်​မဟုတ်​ဖူး ။ ” ​မေ” ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုမှာ သုံးခဲ့တာ ။ ​နောက်​ပိုင်း မင်းသား ရန်​​အောင်​က ” ​လေနု​အေး” ဆိုတဲ့ နာမယ်​နဲ့ စီးရီး တစ်​​ခွေ ထွက်​​တော့ ဒဂုန်​တာရာ ရဲ့ ဘက်​​တော်​သား​တွေ စာနယ်​ဇင်းက ​နေ အုတိ​အော်​​သောင်းသဲ လုပ်​လို့ စကားလုံး အသုံးပြုခ ငါး​ထောင်​နဲ့ ကန်​​တော့ ရပါ​ရောလား ။ ​ရွှေတစ်​ကျပ်​သား တစ်​​ထောင်​​လောက်​ပဲ ရှိ​သေးတာ​နော်​ ။
ခုလို ရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
ဘာတွေ အဖြစ်သည်းနေလဲလို့ မေးချင်သူတွေအတွက် ရှင်းတာပေါ့နော်။
ဒါပေမယ့် အဲသလို လှတဲ့ စာသားလေးတွေ သီချင်းလေးတွေ ကဗျာလေးတွေ မှီငြမ်းပြီး ရေးရတာ ပိုအသက်ပါသလား ထင်လို့ သုံးချင်တယ်။
အများကြီးသုံးမိတဲ့ စာဆို ခရက်ဒစ်ပေးရတာနဲ့ ပြည့်သွားမှာပဲ။
ညည်းက ရန်စဒါလားအေ့…… နာတို့အမျိုးတောင့်တယ် … ဘာရေးရေး ၀ိုင်းအူ … အဲ အာ (ဇပါးလင် မွှားချင်းတီးခံဗာ ) ပေးမယ့် လူချိဒယ် … နဗမ်းထလုံးလိုက်ရ အဖြဲမခံရပဲ အခွဲခံရမယ် … အရှက်
​ဒေါ် တုန်​ ဘယ်​နား​လေး အိပ်​​ပျော်​​နေရက​နေထ လာတာလဲ သွား သွား မျက်​နှာသစ်​လိုက်​ဦး ​ပေါင်​မှာ အာ…. မှားလို့ ပါးမှာ သွားရည်​စီး​ကြောင်းကြီးနဲ့ အဟိ
အဘနီဖြဲဒါ လူများသားပဲ လာကျိသူဒွေ